Email ọkachamara na-aga nke ọma dị n'okpuru ọtụtụ njirisi
Edere site Tranquillus | Nov 16, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Email ọkachamara na-aga nke ọma: kedu ka ọ dị?
Le mail na-ekwe nkwa ọsọ karịa na nnyefe ozi. Mana anyị anaghị ede email ọkachamara ka anyị na-ekwu, obere n'otu ụzọ ahụ anyị na-ede akwụkwọ ozi ma ọ bụ leta. Enwere usoro obi ụtọ nke a ga-achọrịrị. A na-eji njirisi atọ iji chọpụta email ọkachamara na-aga nke ọma. Nke ikpeazụ ga-abụrịrị nkwanye ùgwù, nkenke na kwenye. Anyị nwere mmasị naanị koodu nkwanye ùgwù ka dabara na ozi-e azụmahịa.
Email nke ọma: kedu ihe ọ bụ?
Iji nwee ihe ịga nke ọma, email ọkachamara ga-abụrịrị nkwanye ùgwù, ya bụ, ozi-e nwere mkpesa na mmalite na usoro nkwanye ùgwù na njedebe. A ga-ahọrọ usoro ọ bụla dịka njirimara ma ọ bụ ọkwa onye a na-agwa ya si dị. Ya mere ọ dabere na njikọ ma ọ bụ ogo nke ihe ọmụma dị n'etiti onye na-ezipụ na onye nnata.
Dị ka ị maara, enwere koodu ederede na azụmahịa ọ bụla. A ga-akwado usoro nkwanye ùgwù ruo n'ókè dị anya n'usoro nhazi nke na-ekewa ndị na-ede akwụkwọ ozi.
Kpọọ usoro na email ọkachamara
Enwere ọtụtụ nhọrọ oku na email ọkachamara:
A na-akatọ ojiji ya mgbe ụfọdụ. Ma a na-eji usoro a mgbe ụfọdụ mgbe a na-agwa ndị anyị maara okwu, mana ndị anyị na ha na-enwebeghị njikọ siri ike.
Ndewonu onye obula
A na-eji usoro nkwanye ùgwù a, n'okpuru ọnọdụ abụọ. Nke mbụ bụ na a na-ezigara ọtụtụ ndị nnata ozi n'otu oge. Nke abụọ bụ na ọ bụ ozi email.
Ndewo aha mbụ sochiri ya
GỤỌ Email template iji meghachi omume na arịrịọ maka onye ozi
A na-eji usoro oku a mgbe onye nnata bụ onye ọrụ ibe ma ọ bụ onye ama ama.
Aha mbụ onye nnata
N'okwu a, ọ bụ onye ị maara n'onwe ya yana onye gị na ya na-akpakọrịta ugboro ugboro.
miss ma ọ bụ nna ukwu
Nke a bụ mmekọrịta nkịtị, mgbe onye nnata ekpughereghị gị njirimara ha.
Ụdị mkpesa a dabara na ọnọdụ ndị ị na-amaghị ma onye nnata gị ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị.
Maazị Onye isi / Maazị Prọfesọ…
A na-eji usoro nkwanye ùgwù a mgbe onye na-emekọrịta ihe nwere aha pụrụ iche.
Okwu ọma na njedebe nke email ọkachamara
Dịka ọ dị na nke gara aga, enwere ọtụtụ usoro nkwanye ùgwù iji mechaa email ọkachamara, na-eburu n'uche profaịlụ onye nnata. Anyị nwere ike ịkọwa n'etiti ndị a:
Onye nke gị
Ekele nkwanye ùgwù
Ka o sina dị, nkwanye ùgwù bụkwa ịma ka esi agụgharị ya ọzọ. Ị nwere ike ịmaghị ya, mana maka ọtụtụ ndị mmadụ na ụwa ọkachamara, ozi-e nke jupụtara na njehie bụ ihe ịrịba ama nke enweghị nlebara anya maka onye nnata. Dị ka o kwere mee, ị kwesịrị ịgụgharị onwe gị ka ị hụ na a na-asọpụrụ ụkpụrụ ụtọ asụsụ na nke okwu ọnụ.
Isi ihe ọzọ dị mkpa, ndebiri. Ekwesịrị ka amachibido ya na ozi-e ndị ọkachamara gị, ọbụlagodi mgbe ọ bụ ozi-e gbanwere n'etiti ndị ọrụ ibe gị.
Email ọkachamara na-aga nke ọma dị n'okpuru ọtụtụ njirisi November 16th, 2021Tranquillus
gara agaRelance France: ndị 500 ga-erite uru na nkuzi cybersecurity!
-esonụỤdị nkwanye ùgwù a na-ahụkarị na-enwekarị ihe anọ
Kọwapụta mmejọ na ọrụ: olee otu ndị na-agụ gị si ahụ gị?
Email template iji meghachi omume n'arịrịọ maka ozi site n'aka onye nlekọta